လူတွေဆင်နွှဲအဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာကဒီဖြစ်ရပ်အတွက်များစွာသောနေဆဲသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူး ဟယ်လို ? အောက်တိုဘာ 31 ရက်တွင် Celts စပါးရိတ်ရာကာလ၏အဆုံးသင်္ကေတဖြစ်သော Samhain, သူတို့ရဲ့အဘို့ဆောင်သောပွဲကျင်းပဆိုတဲ့အချက်ကို။ သူတို့တကယ်အဟောင်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကုန်လေ၏အသစ်တစ်ခုတဦးတည်းစတင်ကြောင်း။ နောက်ပိုင်းတွင်ခရစ်ယာန်များအားလုံးအဟောင်းဘာသာရေးထုံးတမ်းဖျက်သိမ်းကြပါပြီ, ဒါပေမယ့် Samhain မေ့လျော့မခံခဲ့ရနှင့်နီးပါးကက်သလစ်နိုဝင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသည့်အားလုံးသူတော်စင် '' နေ့ရက်စွဲတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်။ သူကအားလုံးသူတော်စင် (အားလုံး Hallows ဧဝက) ၏နာမကိုအမှီညနေပိုင်းပေးထားခဲ့သည်။ အဘယ်မှာယနေ့ဟယ်လိုဆင်နွှဲဖို့? ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ် 20-ies နှင့်အတူ, အဲဒါကိုများ၏ဖက်ရှင်ဟာဆူညံလှုပ်ရှားမှုများကိုခစျြသူကိုဥရောပကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ယူဆောင်ရှိရာအမေရိကန်, အတွက်အလွန်လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းကနေဒါ, အနောက်ဥရောပ, သြစတြေးလျ, ပင်အများအပြားအာရှနိုင်ငံများ၌ဤကဲ့သို့သောပွဲတော်များပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
အမြဲဆေးထည့်နဲ့အတူ theme ပါတီများကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအားလုံးသူတော်စင်များ၏ညနေပိုင်းတွင်လျင်မြန်စွာလူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, လူတွေဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေမကြာခဏနေဆဲနိုဝင်ဘာလ၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တလျှောက်လုံးကျောင်းထဲမှာ, ဒါပေမယ့်နေအိမ်များနှင့်ကလပ်၌ကျင်းပဖို့မမေးမလျှောက်နေကြပါတယ်ပေမယ့်ရယ်မောခြင်းနဲ့ပျော်စရာစိုးစံ။ ဒီဖြစ်ရပ်အဘို့သင့်တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်အိမ်ပြန်ထုတ်စစ်ဆေးအလွန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျဟောင်းဖယောင်းတိုင်ရှိပါက, ထို့နောက်ချက်ချင်းစားပွဲပေါ်သူတို့ကိုနေရာ။ မြို့ရိုး, ထောင့်အတုပင့်ကူအိမ်ဟာ Thread ထဲကနေဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, သင်အရိုးစုဇီဝဗေဒဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူအခန်းထဲသို့ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကမပါလျှင်သူကအရေးမပါဘူးဆိုရင်။
သရဲတစ္ဆေများနှင့်စုန်း၏ "ကြောက်မက်ဘွယ်သော" ရေးဆွဲအတူလက်ျာလေထုအိမ်လုပ်ရုပ်ပုံဖန်တီးကူညီပါ။ အခန်းထဲမှာနှေးကွေးဂီတနှင့်မှောငျနန်းစံ play ရပါမည်။ Next ကိုအရာသာ creepy များအတွက်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ပျော်စရာ မျက်နှာဖုံးများ နှင့်ဝတ်စုံ - ထိုဖုတ်ကောင်, သရဲတစ္ဆေ, နတ်ဆိုးများနှင့်အခြားမိကျောင်းယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီမှာအဓိကဧည့်သည်များဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြိုင်ပွဲကဒီမှာအထူးရွေးချယ်ထားသည့်ကြသည် - အရှိဆုံးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောပုံပြင်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောနက်နဲသောအရာ, အိမ်သာစက္ကူ mummy နှင့်အခြားသူများအောင်ပထမဦးဆုံးသူဝတ်စုံ, မှော်, tricks, ၏ချီတက်ပွဲပါ။
အတော်များများကဤ action လေးတွေအဘို့ဆိုးရွားကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့လညျးမိမိရွယ်တူထိတ်လန့်ပုံပြင်များ scaring ခန့်အရူးမှ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝတ်စုံကိုရွှင်လန်းသောတစ္ဆေ Casper အတွက် run ဖို့ချစ်ကြတယ်။ ကိုယ့်အခန်းကိုသိပ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောလေထုဖြစ်ပါသည်, က overdo ပါဘူး။ ဇီးကွက်သို့မဟုတ်လင်းနို့အဲဒီမှာတစ်ဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူ Fang ဖုတ်ကောင်များနှင့်ဖရုံသီးထက်ပိုမိုသင့်လျော်သောဖြစ်နဂါးနှင့် Spider-Man အောင်မြင်စွာသေပြီကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ ချိုမြိန်ရယူထားသောပင့်ကူသို့မဟုတ်ရယ်စရာ mordashek အားဖြင့် style အမျိုးမျိုးနိုင်ပါသည်။
မင်္ဂလာဆောင်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကိုဘယ်လို - 1 နှစ်က?
မိန်းကလေးတစ်ဦးအဘို့အလက်ဆောင်ပေးမယ်6နှစ်
သငျသညျ6နာရီအကြာတွင်မစားကြပါလျှင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?
Leukopenia - ထိုအကြောင်းတရားများ
ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးခြေထောက်၏ထိပ်တန်း 10 ဦးစတားပိုင်ရှင်များ
ဂျေရုဆလင် artichoke - လာသောအခါရိတ်လော
ယခုချီလီအတွက်ဖြစ် 22 အကြောင်းရင်းများ!